Dad Yaman ku dhintay. - BBC News Somali
Dad Yaman ku dhintay.
8 Nofembar 2015
Qaybo ka mid ah dalka Yemen labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ku dhintay dad ka badan 50 qof.Ka dib dagaal dhexmaray is-bahaysiga carabta oo dhimac ah iyo fallagada xuutiyiinta oo ay taageerayaan ciidamo taageersan madaxweynihii hore ee Yaman Cali Cabdalla saalax.
Dagaaladii u dambeeyey ayaa waxaa laga soo sheegay Ticis oo ah magaalada sedexaad ee dalka Yaman u weyn oo ururada samafalku ay sheegeen in dagaalku uu caqabad ku noqday sahaydii kumanaan qof oo si xun u gaajoonoon.
Xutiyiinta ayaa dib u soo ceshaday gacan ku heynta gobalka Lahej, oo u dhow magaalada koonfurta ku taala ee Cadan oo ah meel istaraataji ah oo aad muhiim u ah.
Waxaa jira warar sheegaya in ku dhuwaad 30-qof la dilay markii ay fallaagada la wareegeen magaalo agagaarkaas ku taalla.
Guullahan u dambeeyey oo ay xutiyiintu gaareenyaa ayaa u muuqda in uu yahay mid aad gaabis u ah mana aha xitaa wax la sheegi karo.
Intii lagu guda jiray xaggaaga ayaa waxa mucaaradka laga saaray inta badan koonfurta dalka Yaman.
Hase ahaatee, dagaalka dhacay labadii maalmood ee u dambeeyay ayaa muujinaya in falaagada ay ka go'an tahay in gobalka ay ku qaadan dagaal rogaal celin ah.